I-iPhone 4 Li-ion Ukushintshwa Kwebhethri ngomjikelezo we-0 China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > I-iPhone Battery > iPhone 4 Battery > I-iPhone 4 Li-ion Ukushintshwa Kwebhethri ngomjikelezo we-0
I-Model No.: iPhone 4
Ifektri yethu iyinhlangano yokukhiqiza ibhethri ye-iPhone, efanayo nekhono langempela futhi emva kokuhamba komjikelezo wama-500 namanje igcina u-80% amandla. Uma ikhasimende lakho lithola indawo yebhethri ye-iPhone, qiniseka ukuthi liyi-iPhone yangempela ibhethri enekhono eliphezulu. Ngamanye amazwi, hlala kude namabhethri asetshenzisiwe athengisa ku-intanethi ashibhile - kunesizathu sokuthi ashibhile kakhulu. Kodwa singama-iPhone Battery factory ngezinyanga ezingu-12 kuphela zewaranti, kodwa futhi qinisekisa ukuthi wonke amabhethri adlule ukuhlolwa kokusebenza kokuphepha ngaphambi kokuthunyelwa. Ukuphila kwebhethri ngezikhathi ezingu-500-800, namanje kugcina u-80% amandla emva kwezikhathi ezingu-500. sisebenzisana ne-backsales yokulungisa ifoni esitolo, sibheka izesekeli zezingcingo zefoni bese sibheka esitolo sewebhu. Ibhetri yokufaka esikhundleni se-iPhone 4, ifanele ikhodi ye-APN: 616-0512, 616-00513, 616-0520, 616-0521. Awukwazi ukufanelana ne-iPhone 4S. Lena entsha yebhethri ye-iPhone, siphakamisa ukuthi ucele i-professoional yokulungisa isitolo kusiza ukuhlangana. Amathuluzi angahlanganisiwe uma kunesidingo sicela uxhumane nathi.